स्वस्थ शरीरको लागि आयुर्वेद | Hamro Patro
अर्को के पनि हो भने, यसले दुखाई कम गर्ने औषधिले तुरुन्त राहत प्रदान गरेजस्तो काम गर्दैन । आयुर्वेदको असर बिस्तारै मात्र देखा पर्ने हुनाले तुरुन्त राहत खोज्नेहरुका लागि यो निकम्मा हुन जान्छ ।
हामी धेरैजसो आयुर्वेदलाई आधुनिक औषधिसँग तुलना गर्ने दुस्साहस र गल्ती गर्छौँ । यही तुलनाको विवादमा आयुर्वेदको बुझाइलाई साँघुरो बनाउँछौ । एक त, आयुर्वेदले रोग उन्मूलनको काम मात्र गर्दैन, यसकारण यसलाई औषधिहरुसँग तुलना गर्नुपर्ने जरुरी छैन । अर्को के पनि हो भने, यसले दुखाई कम गर्ने औषधिले तुरुन्त राहत प्रदान गरेजस्तो काम गर्दैन । आयुर्वेदको असर बिस्तारै मात्र देखा पर्ने हुनाले तुरुन्त राहत खोज्नेहरुका लागि यो निकम्मा हुन जान्छ ।
हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने आयुर्वेद परम्परागत विज्ञान हो र यसलाई यसरी नै हेरिनुपर्छ । यसमा आफ्नो हेरचाह आपैmँ गर्नपर्ने, सुस्वास्थ्य तथा रोग निवारक स्याहारका अवधारणाहरु हावी हुने गर्दछन् । आयुर्वेदले रोग निवारण अवश्य गर्दछ । पेन किलर मानिसका लागि हानिकारक हुन्छ तर आयुर्वेदले दुखाइलाई बिस्तारै तर प्राकृतिक रुपमा कुनै नोक्सान नपु¥याइकन गर्न मद्दत गर्दछ ।
आयुर्वेदलाई हाम्रो जीवनपद्धतिमा अनुसरण गर्न र प्रकृतिले नै वरदान स्वरुप प्रदान गरेको लाभको फाइदा लिन गाह्रो छैन । जरुरी छ त, आयुर्वेदबारे थाहा पाउन, जान्न, यसबारे सचेत हुन र हाम्रो जीवनमा सदैव लगातार यसको प्रयोग गर्न । आयुर्वेदले काम गर्छ भनेर प्रमाणित गर्न यो एक मात्र तरिका हो ।
शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन आयुर्वेदले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ । हामी आयुर्वेद भन्ने बित्तिकै जडिबुटिहरु सम्झन्छौँ । खासमा यी जडिबुटिहरु के हुन् र यसले कसरी हामीलाई फाइदा गर्छ त ? जडिबुटि भन्नेबित्तिकै सधैँ हामीले मुख बिगारेर खानुपर्ने तीतो औषधि भनेर बुझ्न पर्दैन । साधारणतय हाम्रै भान्सामा पाइने अदुवा, बेसार, दालचिनी, मह, आदि पनि जडिबुटि नै हुन् । हामीले गर्नुपर्ने एक मात्र काम भनेको यसको प्रयोग जानेर र धेरै मात्रामा गर्नु हो ।
आयुर्वेदको कुरा गर्नुपर्दा जडिबुटिबाट बनेका कपडाहरु पनि फाइदाजनक छन् । यस्ता कपडाहरु जैविक कपडाबाट बनेका हुन्छन् र जडिबुटि माडिएका हुन्छन् । यो हाम्रो छालामा माडिँदा यसले हाम्रो शरीरलाई फाइदा पु¥याउने हो । यसमा पनि बेसार माडिएको कपडा छ भने, बेसारको प्राकृतिक गुणहरु हाम्रो छालाले सोस्दछ र यसमा हुने किटाणुसँग लड्ने क्षमताका कारण कुनै पनि संक्रमणबाट बच्न सक्छौँ ।
योगा शब्द सुन्दा गाह्रो सुनिन्छ ? योगा खासमा स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ, तर योगा गर्न सुरु गर्न सक्नुभएको छैन भने सास फेर्ने तरिका मात्र सिकाउने सूर्य नमस्कार वा प्रणायम गर्न सक्नुहुनेछ ।
यी सबै अति आवश्यक छन् किनभने आयुर्वेदले हामीलाई आनन्दले जीवन व्यतित गर्न सिकाउँछ । बिहान सबेरै उठ्ने र छिटो सुत्ने पनि यसका पाटा हुन् । मानिसले शारीरिक र मानसिक दुवै रुपमा आपूmलाई स्वस्थ महसुस गर्न सक्नुपर्छ । मानसिक विश्राम प्राप्त गर्नका लागि राम्रो निन्द्रा पर्न अति जरुरी हुन्छ जुन ५ मिनेटको योगाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । केही बेर हिँड्ने मात्र गर्दा पनि मुटु बलियो हुन्छ, यसले हामीलाई शारीरिक रुपमा स्वस्थ राख्दछ । यसरी हिँड्दा शरीरलाई बढी अक्सिजन तथा पोषण मिल्ने भएका कारणले यो वैज्ञानिक तरिका पनि हो । हामीले जति प्रयास गर्दा पनि, हाम्रो शरीर तथा आन्तरिक प्रणालीमा बाह्य प्रभाव त पर्छ नै । यसका लागि, हानिकारक विषादीहरुबाट बच्न र शरीरबाट फाल्न पनि जरुरी हुन्छ । यस्ता विषादीहरु शरीरबाट फाल्ने एउटा तरिका भनेको दिनहुँ धेरै पानी पिउनु हो । सजिलै पाइने भएकाले हामीले पानीको महत्वलाई कम आँक्ने गरेका हुन्छौँ । शुद्ध तथा सफा पानीले हाम्रो शरीरभित्रको फोहोर, हानिकारक विषादी फाल्न, पाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्न र बिना कुनै असर शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
हाम्रो जीवनमा आयुर्वेदको अभ्यास अनुसरण गर्नका निम्ति यी साधारण प्रयासहरु हुन् । जानेर यस्ता विधि तथा जडिबुटिहरुको प्रयोग गर्नाले हामीले हाम्रै वरिपरि पाइने वातावरणबाट सहजै धेरै फाइदा लिन र स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छौँ ।